शाक्य हटाईए, महर्जनको नियुक्ती अवैध, तानीशाही बन्दै एन्फा अध्यक्ष | Citizen Post News
शाक्य हटाईए, महर्जनको नियुक्ती अवैध, तानीशाही बन्दै एन्फा अध्यक्ष
२०७५ साउन २१ गते ०९:४०
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले गैरकानुनी काम गर्न थालेका छन् । शेर्पाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कर्मचारी रहेका बालगोपाल महर्जनलाई एन्फाको सहायक प्रशिक्षकमा पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्ती दिएपछि उनको अहिले सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
नेपाली फुटबलको नेतृत्व भ्रष्ट भएको भन्दै लामो समयदेखि शुद्धीकरण अभियानमा रहेका शेर्पाले एकाएक सम्झौता विपरित सहायक प्रशिक्षक राजु शाक्यलाई हटाएर उनको ठाउँमा महर्जनलाई नियुक्त गरेका हुन् । अध्यक्ष शेर्पाले शाक्यलाई हटाउनुको कारण उनी राखेपको कर्मचारी भएको दलिन पेश गर्ने गरेका छन् । शेर्पा भन्छन्,‘कानुनले एउटै ब्यक्तिलाई दुई ठाउँमा काम गर्न दिदैन् । त्यसैले उनलाई हटाएका हौं ।’ जवकि शाक्यले अवकाशपछि मात्र एन्फासँग जोडिएका थिए ।
उनकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने पनि महर्जनको नियुक्ती गैरकानुनी छ । प्रशिक्षक शाक्यको हकमा त्यो नियम लागू हुन्छ भने किन महर्जनका लागि भएन ? प्रश्न उनीमाथि ठडिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कर्मचारीलाई कसरी एन्फा अध्यक्ष शेपार्लले पारिश्रमिक पाउने गरी सहायक प्रशिक्षकमा नियुक्त दिए ? एउटै पदका लागि दुई फरक ब्यक्तिलाई किन फरक नियम लागू गरियो ? त्यसको उत्तर भने शेर्पाले गैरजिम्मेवारीपूर्वक दिन थालेका छन् । उनी भन्छन्,‘नेतृत्वमा अहिले म आएको छु । मैले आफ्नो टिम बनाउने हो । मेरो एउटा उदेश्य छ, त्यो उदेश्य हासिल गर्नका लागि टिम त बलियो हुनुपर्यो नि ?’
बेकारमा फुटबल खेलेछुः
आफ्नो सम्पूर्ण जिवन फुटबलमा विताएका राजु शाक्य विना जानकारी पूर्वयोजना अनुसार आफुलाई हटाइएपछि निकै दुखित मात्र होइन, चिन्तित पनि छन् । सम्झौता विपरित सहायक प्रशिक्षकबाट हटाएपछि शाक्यलाई ठूलो पछुतो भएको छ । शाक्य भन्छन्,‘अहिले आएर बेकारमा फुटबल खेलेछु जस्तो लागिरहेको छ । बरु मैले बाबुकै ब्यापार–ब्यवसाय सम्हालेको भए सायद आज यो अवस्था आउने थिएन, गाडी चढेर हिड्न सक्थेँ होला । तर मैले हार खाएको छैन्, तन मन भने फुटबलमै छ ।’
उनकै नेतृत्वमा मुलुकलाई सफलताः
शाक्य सर्वाधिक सफल खेलाडी र खेल ब्यक्तित्व हुन् । जसले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण सुनौलो समय खेलमै सर्मपर्ण गरे । मुलुकले फुटबलमा हासिल गरेको हरेक सफलतामा शाक्यको महत्वपूर्ण योगदान र प्रत्यक्ष सहभागिता छ । पहिलोपटक नेपालले स्वर्ण जित्दा उनकै कप्तानीमा नेपालले स्वर्ण जितेको थियो । दोस्रोपटक नेपालले स्वर्ण जित्दा भने उनले प्रशिक्षकको भूमिका निभाइरहेका थिए ।
त्यसपछिका अनगिन्ति सफलतामा उनको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । विगत २१ बर्षदेखि प्रशिक्षकको भूमिका निभाइरहेका यिनै शाक्यलाई एन्फाको नयाँ नेतृत्वले सहायक प्रशिक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । शाक्यले आफुलाई जानकारी विना नै एन्फा नेतृत्वले हटाएको बताए । जबकि साफ च्याम्पियसिपसम्मका लागि शाक्यको एन्फासँग सम्झौता कायमै छ । सम्झौता बाँकी हुँदाहुदै उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि एन्फा अध्यक्ष शेर्पाको निकै आलोचना भएको छ ।